Chakrapath - Online News Portal of Nepal,News of Nepal,Political and Poltics News,Administration,Crime,Arts,World News,International News,Social News, Sport News,Ecomony,Technology,Business,Nepali Banking News,Entertainment,Interview,Information Technology,Todays Horoscope,News of Kathmandu
८ फाल्गुन २०७३ |
विचार / विश्लेषण भारतको प्रतिक्रियात्मक कुटनीतिः नेपाल–चीन कारोवारमा किन उत्तेजना ?
Wednesday, 28 Dec, 2016 5:01 PM
दुई साताअघि २ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलरको एक ‘कनसाइनमेन्ट’ चीनबाट नेपालका लागि छुट्यो । जव चीनबाट नेपाल लक्षित ती कार्गो छुटे, त्यसले स्वभाविक रुपमा काठमाडौं र बेइजिङलाई प्रभावित पार्यो । नेपाल र चीनका सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ सामान स्याप्रुबेसी नाकाबाट नेपाल भित्रिने कुरालाई प्राथमिकतापूर्ण महत्व दिएर सम्प्रेषण गरे । तर तनाव देखियो नयाँदिल्लीमा । मुद्दा नेपाल र चीनको हो । तर त्यसमा चासो बढ्यो भारतको । भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यहाँका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै चीनियाँ उत्पादनले नेपालमा भारतीय बजार बिस्थापन गर्ने भन्दै आक्रोश र चिन्ता दुबै पोखे । भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाललाई सांकेतिक रुपमै भए पनि चीनले त्यही स्याप्रुबेसी नाका हँुदै पेट्रोलियम पदार्थ देखि खाद्यान्न समेत आपूर्ति गरेको थियो । अप्ठ्यारोमा परेका बेला चीनले नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्यो तर भारतले नाकाबन्दी लगायो । हो, भूकम्पलगत्तै भारतले नेपाललाई ठूलो र अति आवश्यक सहयोग गर्यो तर जति सहयोग गर्यो, त्यो भन्दा बढी प्रचार गरियो । त्यही भएर बाध्य भएर नेपालमा अभियान चल्यो ‘गो ब्याक इण्डियन मिडिया ।’
आफूले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाका सर्त नमानेको भन्दै भारतले दिएका चेतावनी खेदजनक छन् । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दाहालले दिल्लीसमक्ष के के सर्तनामा गरे, ती नेपाली जनताको जानकारीमा छैनन् । नेपाल र नेपालीको हित बिरुद्धका कुनै पनि कबुलियतनामालाई मान्न नेपाल बाध्य छैन । चीनसँग किन संयुक्त सैन्य अभ्यास भन्ने खालका जुन भारतीय रिर्पोट आएका छन्, तिनको सरोकार नेपालसँग छैन, दाहालसँग मात्र छ ।
नेपालका लागि भारत र चीन समान छिमेकी र मित्रवत राष्ट्र हुन् । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक छ र भावनात्मक पनि छ । त्यही भएर स्वभाबिक रुपमा नेपाली बिदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा भारत व्यवहारतः परेकै छ । तर जव नेपालले आफूलाई चाहिने चिनियाँ सामाग्री चीनबाट चिनियाँ बाटो हुदै ल्याउन खोज्छ, त्यसमा भारतको आपत्ती किन हुनुपर्ने ? भारतमा स्वयं चिनियाँ उत्पादनको ठूलो बजार छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो बजार नै भारत हो । यो तथ्यलाई चीनले पनि बुझेको छ, भारतले पनि बुझेको छ । अहिले नै दुई राष्ट्रबीच ७५ बिलियन डलरको व्यापारिक कारोबार छ । जसलाई १ सय बिलियन बनाउने लक्ष्य दुबैले राखेका छन् ।
भारतभर चिनियाँ सामान सहज रुपमा उपलब्ध हुने तर नेपालमा तिनै सामान आउन लाग्दा भारतीय बजार बिस्थापित हुने भन्ने कुतर्क मात्र हो । फेरि अहिले विश्वको अर्थव्यवस्था मुलतः बजारमा आधारित अर्थ व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धाको समयमा जसको उत्पादन बलियो र सस्तो पर्छ, त्यो खरिद गर्ने अधिकार हरेक सार्बभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रलाई छ । हो, राष्ट्रले राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पूँजिपतिलाई प्रबद्र्धन गर्न सक्छ । त्यसैले भारतजस्तो लामो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको, राजनीति र कुटनीतिमा परिपक्व देश र तिनका नेतालाई यस्तो प्रतिक्रियात्मक कुटनीति कुनै पनि अर्थमा सुहाउँदैन । भारतीय नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा हुनुपर्छ–दक्षिण एसियामा भारतबिरोधी भावना बढ्नुको कारण भनेकै यही भारतीय प्रतिक्रियात्मक र ठूल्दाई कुटनीतिका कारणले हो । भारतीय प्रतिक्रियात्मक कुटनीतिको दोस्रो उदाहरण हो– नेपाल र चीनवीच फेबु्रअरीमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति कडा प्रतिक्रिया । सन २०१७ को फेब्रुअरी १० मा नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने समाचार सार्बजनिक भयो । यो रिपोर्टको स्वतन्त पुष्टि चिनियाँ र नेपाली अधिकारीले गर्न समेत पाएका थिएनन्, नयाँदिल्ली फायर भयो । मंगलबारका भारतीय सञ्चारमाध्यमको मुख्य आक्रोश र चिन्ताको बिषय नै त्यही संयुक्त सैन्य अभ्यासमाथि पोखियो । भारतसँग नेपालले बर्षेनी यस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आइरहेको बेला चीनसँग चाहीँ गर्नै हुँदैन भन्ने भारतीय सरकार र अधिकारीको धारणा कुन ैपनि अर्थमा जायज छैन । भारतले बुझ्नुपर्ने हो नेपाल चीनसँग नेपालको हितमा हुने कुनैपनि सम्झौता÷कारोबार गर्न स्वतन्त्र छ । नेपालको चीनसँगको असल सम्बन्धबाट नयाँदिल्ली प्रतिक्रियात्मक बन्नु मनोबैज्ञानिक त्रासदी मात्र हो । मोदीलाई थाहा हुनुपर्छ– यस्तै रबैयाका कारण दक्षिण एसियामा भारतबिरोधी भावना बढ्दो छ । चिनियाँ सेना बिश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली सेना मानिन्छ । युद्धकौशलमा मात्र होइन, निर्माणमा पनि चिनियाँ सेना उदहरणीय छ । अमेरिकापछि सैन्य र प्रतिरक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको चीनले हो । फेरि चीनियाँ सेनाले जस्तोसुकै भौगोलिक जटिलतामा पनि अनुभव लिएको छ । त्यस्तो अनुभवी सेनासँग नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दा नेपाललाई फाइदा छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको सुरक्षा समेत त्यसले सुनिश्चित गर्छ । जव नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चीनसँग यस्तो संयुक्त सैन्य अभ्यास आवश्यक छ भने यसमा निर्णय लिन नेपाल स्वतन्त्र छ । विदेश नीति र सुरक्षा नीतिको पहिलो उद्धेश्य नै राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण हो । त्यस अर्थमा यो उपयुक्त निर्णय हो । यसमा नयाँदिल्लीले आपत्ती जनाउनु कुटनीतिक र सुरक्षाका दृिष्टकोणले पनि उपयुक्त छैन ।
आफूले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको र बनाउँदाको बेला राखेका शर्त नमानेको चेतावनी र शैली जुन समाचार भारतीय संचारमाध्यममा आएका छन्, ती खेदजनक छन् । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दाहालले दिल्लीसमक्ष के के सर्तनामा गरे, ती नेपाली जनताको जानकारीमा छैनन् । नेपाली जनता र स्वार्थबिरुद्धका कुनै पनि कबुलियतनामालाई मान्न नेपाल बाध्य छैन । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रबेश गरेको र त्यसका लागि भारतले दाहाललाई सहयोग गरिरहेका बेला चीनसँग किन संयुक्त सैन्य अभ्यास भन्ने खालका जुन भारतीय रिर्पोट आएका छन्, तिनको सरोकार नेपालसँग छैन, दाहालसँग मात्र छ ।
महाभियोगको विपक्षमा उभिन सजिलो छैन कांग्रेसलाई
गोवामा दाहालको ब्यवहारले नेपालको राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि धक्का सम्पादकीय : संविधान संसोधनबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: सार्बभौम हैसियत कायम राख मोदीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक गर राजनीति
प्रधानमन्त्रीले अचानक वालुवाटार बोलाएपछि मोर्चाको बैठक सुरु प्रधानमन्त्री दाहालले साँझ ७ बजेको समयमा छलफलका लागि भन्दै अचानक वालुवाटार बोलाएपछि पोजिसन क्लियर गर्न मोर्चाको बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनाव घोषणाबाट पछाडि फर्काउने विषयमा छलफल गरिने मोर्चाका नेताहरुले वताएका छन् । चन्दलाई बढुवा गर्ने मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ, ८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ । कांग्रेस माओवादीको निश्कर्ष– मोर्चाले भने झैं संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव असम्भव सत्तारुढ कांग्रेस माओवादीको आइतबारको बैठकमा भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनाव घोषणा गर्ने हो भने चुनावै नहुने अवस्था आउन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको हो । विश्व
टेक्सासमा फेरि हजारौँ जनताको जुलुस प्रदर्शन
हाउस्टन, ८ फागुन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्सासको डाल्लास महानगरमा करिब एक हजार सात सय जनाले विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।
चीन र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिबीच बधाइ साटासाट
बेइजिङ्ग, ८ फागुन । चीन र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनाबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ४५ औं बार्षिकोत्सवका दिन चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ग तथा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मोरिसियो माक्रिले आज एक आपसमा बधाई ज्ञापन गरेका छन् । समुद्री सम्पत्तिको लडाइँ
न्यूर्योक, ७ फागुन – समुद्रमा परिवर्तन आइरहेको छ तर त्यो सकारात्मक भने होइन । वैज्ञानिक प्रमाणले समुद्र उजाड, तातो र बढी अम्लीय बन्दै गएको देखाउँछ, जसबाट समुद्रीय जीवन गम्भीर दवाबमा पर्न गएको छ । तर समाचार राम्रो पनि छ : प्रमाणले यो पनि देखाउँछ कि समुद्र पुनर्जीवित हुनसक्छ र त्यसको परिणामलाई साकार तुल्याउन विश्व सहमत पनि भइसकेको छ । विचार
ओली डक्ट्रिन, प्रचण्ड र पाँच बुँदे रोडम्याप प्रचण्डजी ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’को दशामा छन् । असक्षमताको पगरी गुथेर फर्कनुको अर्को बाटो उनीसामु देखिन्न । दक्षिणपन्थीहरुको बैसाखी टेकेर नौनीको लिस्नो मार्फत बालुवाटार छिरेको नतिजा आगोमा पग्लदा सडकमा नै हुने अवस्थामा आइपुग्ने भयो ।
एरिका नाम गरेकी फिजियो थेरापिष्टलाई त्रिभुवनको सूचना चोर्न अंग्रेजले खटाएका थिए
त्रिभुवन सौखिन खालका मान्छे थिए, त्यही कारण धेरै ठाउमा प्रयोग पनि भए । एरिका भन्ने एकजना अंग्रेज फिजिओथेरापिष्ट त्रिभुवनको साथमा थिइन् । अंग्रेजहरुले एरिका मार्फत सूचना चोर्ने र त्रिभुवनलाई गलाउने काम गरे ।
सुन्दरीजल जेलबाट मध्यरातमा बीपीलाई नारायणहिटी ल्याइएको कुरा किन आउँदैनन् ?
नेपालमा अत्यावश्यक ठानिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शिलान्यास गर्न बीपीलाई केले रोक्यो ? उनकै कार्याकालमा कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो । तर, उनले आर्थिक रुपमा आवश्यक नभएको भन्दै प्रस्तावलाई इन्कार गरे । यद्यपी कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएका, आफ्नो सम्पूर्ण किशोर जीवन राणाकालीन दरवारको खोपीमा विताएका राजा महेन्द्रले नै यी दुवै काम किन गर्नु पर्यो होला ?
Loading... खेल मनोरन्जन अर्थ समाज प्रशासन राजनीति शीर्षपृष्‍ठ हामी राजमोती मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित चक्रपथ डटकमका लागि अध्यक्ष : राजेन्द्र कार्की, सम्पादक : रामशरण बजगाईं, कार्यालय : अनामनगर, काठमाडौं,फोन नं ०१-४२४१९४८, Email : echakrapath@gmail.com
Relationship Officer : Roshan R. Gartaula
Copyright © 2017 Chakrapath. All Rights Reserved.
Powered by: Top